Usoro ahia kachasị elu maka Ọgbọ Na-eduga | Martech Zone
Anyị metụrụ otu agadi ahịa taa aka nke na-arụghị ọrụ na anyị n'afọ gara aga. Otu afọ gara aga, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji akụ anyị n'ihi na anyị nọ n'ihu usoro atụmatụ njikarịcha ọchụchọ. Ugbu a, ekwenyere m na anyị na-akwali ndị ahịa anyị ịga n'ihu n'okporo ụzọ iji nweta azum ọdịnaya yana ahịa akpaaka. Ọ na-efeli elu, anyị nọ n’ụzọ ziri ezi. Dị ka Oracle Eloqua si kwuo, teknụzụ, ịre ahịa email, ọsọ na ọdịnaya ọdịnaya bụ ndị na-akwọ ụgbọ ala na-akpata usoro atụmatụ azụmaahịa kachasị emetụta ugbu a na ntanetị.
A na-ahụta Email dị ka ọrụ azụmaahịa dijitalụ kachasị mkpa yana mkpa maka ọsọ na mkpa bụ nsogbu kachasị, dị ka akụkọ Oracle Eloqua si kwuo, Kọwa Ahịa Ahịa nke Oge A: Site na Ezigbo Ka Ezigbo. Nkwupụta ahụ gosipụtara ọtụtụ ebe dị mkpa nke ndị na-eme mkpebi azụmaahịa kwesịrị ilekwasị anya - yana enweghị ihe ijuanya na enweghị ego n'akụkụ ndị na-ere ahịa oge a n'onwe ha. Usoro ahia nke bara ọgaranya, dị ka akwụkwọ ọcha na ntanetị weebụ, dị mkpa maka ọgbọ na-eduga ma na-azụlite nurturing. Ọzọkwa, Nkà okike na ihe ọmụma banyere teknụzụ ahịa dị oke mkpa na ahịa ọgbara ọhụrụ.
Tags: content Marketingdigital marketingemailedu ọgbọndu nurturingteknụzụ ahịaahịa taaokwu eloquawebcastakwụkwọ ọchawhitepapers
Evercontact: Melite Ama kọntaktị gị na Inbound Email Signatures
O doro anya na email bụ otu n'ime ọrụ ahịa ahịa dijitalụ kachasị mkpa. Anwe usoro atụmatụ email doro anya ma lekwasị anya dị ezigbo mkpa maka ngwakọta ahịa gị; na-enweghị usoro akọwapụtara nke ọma ahịa ROI email gị nwere ike ịta ahụhụ.
Ee ma mgbe ụfọdụ, mgbe marketer na-agbatị maka ego ha ga-ahapụ usoro ọdịnala ogologo oge ma kwalite maka ezigbo ego…
Anọ m na ọnọdụ a na hoo haa na ọ bụghị oge iji tụlee uru ọdịnihu nke ụlọ listi. Ma ozugbo eluigwe na ala ọkọdọ weghachiri eweghachi ịtụ ka mere ndepụta ụlọ 🙂
@MarketSecrets: disqus M ga-agbanye ndenye aha email. Ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ maka usoro dị mkpirikpi ma na-adọta ndị mmadụ na saịtị gị… gịnị ga-enye gị ndenye aha maka ndị 'nwere ike' nwere mmasị mana ha adịghị njikere ịzụta ma? Nke a ga - eme ka itinye ego gị dị mkpụmkpụ ma mee ka ị nwee ike ịpị ozi ọzọ na ndị na - edebanye aha n'okporo ụzọ.
Aghọtara m okwu gị Caleb, mana m kwenyere na Doug.
Nnukwu ihe omuma!